ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံသား ဘင်္ဂလာရခိုင်များ မြန်မာနိုင်ငံထဲ စိမ့်ဝင်လာနေခြင်းအား တားဆီး ကန့်ကွက်ရန် သင့်မှာလည်း တာဝန်ရှိသည်။ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံသား ဘင်္ဂလာရခိုင်များ မြန်မာနိုင်ငံထဲ စိမ့်ဝင်လာနေခြင်းအား တားဆီး ကန့်ကွက်ရန် သင့်မှာလည်း တာဝန်ရှိသည်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နယ်စပ်တစ်လျှောက်က ခိုးဝင်လာပြီး သူတို့ကို သူတို့ ရခိုင်လူမျိုး ဟန်ဆောင်နေသောဘင်္ဂါလာခေါတော ရခိုင်အတုများကို ဖေါ်ထုတ်အရေးယူဖို့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အနေဖြင့် မဖြစ်မနေထည့်သွင်း စဉ်စားဖို့ အချိန်အခါက တောင်းဆိုနေပါပြီး။
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသားဘင်္ဂါလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နှစ်စဉ်း (၂၀၀၀) နှစ်ထောင် ကနေ (၃၀၀၀)သုံးထောင်ကျော် တို့သည် ၎င်းတို့၏ အိုးအိမ်များကိုဆွေမျိုးများအား ပေးအပ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ကူးဝင်လာနေကြောင်း ဘင်္ဂလာအစိုးရမှ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။ အလားတူ သတင်းမျိုးကို ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျအစိုးရမှ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်းပုံမှန် ထုတ်ပြန်လေ့ရှိပါတယ်။
ဘင်္ဂလာ-မြန်မာနယ်စပ် ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသ ရွာတော်ခရိုင် ရုန်မော်မြို့နယ် ရုန်မော်မြို့ နယ် ဆိုတာ ဘင်ဒရိုဘင်ခရိုင်က ဘင်္ဂါလာ ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သက်သက်သာ နေထိုင်ရာရွာများဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မြို့နယ်တဝိုက်၌ ရှေ့ ယခင်ကတည်းက နေထိုင်လာသော ဘင်္ဂါလာရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ များသည် ရွာလုံးကျွတ် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ခိုးဝင်လာပြီးလျှင် ထိုမှတဆင့် ပြည်မဘက်သို့ရွေ့ ပြောင်းနေထိုင်လာသူများ သိန်းပေါင်းများစွာရှိနေပါပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ ပညာတတ်အချိုဆိုလျှင်လွှတ်တော်အပါဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အာဏာရှိနေရာ အတောများများမှာ နေရာယူထားပြီး၍ ယခု အခါ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ခွဲထွက်ပြီး ဘင်္ဂါလာရခိုင်အတု သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်ရန် အပြင်းအထန်ကြိုးစား အားထုတ် လာသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ရင်လေးမိပါတယ်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျက ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီမူစလင်များကို စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ရတာ လွယ်ကူသလောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်နေသော ဘင်္ဂါလီရခိုင်များကိုမူ စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ရန် အလွန် ခတ်ခဲ နိုင်ပါသည်။အဘယ့်ကြောင်းဆိုသော ၎င်းတို့သည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဘာသာတူ ရုပ်ရည်တူ လူမျိုးတူတွေဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။
သမ္မကြီးကိုယ်တိုင် ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျဘက်က ဘင်္ဂါလီမူစလင်တွေ ခိုးဝင်လာတာ မရှိသလောက်ဘဲလို့တရားဝင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သလို့ ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျဘက်က ခိုးဝင်လာနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်အနွယ်များကိုလည်း အချိန်မှီ စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ပြီး တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေညာစေချင်ပါတယ်။ကျနော် တောင်းဆို သကဲ့သို့ မြန်မာလူထု တစ်ရပ်လုံးကလည်း လိုလား တောင်းဆိုမိမယ်လို ယုံကြည်မိပါတယ်။
ဤကိစ္စကို အခုကတည်းက နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ထည့်သွင်း မစဉ်စားခဲ့ရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံး ရခိုင်ဟန်ဆောင် နေသူ ဘင်္ဂါလီရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ လက်ထဲကျရောက် သွားမှတော့ဘာမှတတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာအားလုံးကို အစိုးရဘက်က လွှဲပြောင်း မပေးခင် ထိုပြည်နယ်ရဲ့ အနာဂတ်ကို မြင်နိုင်အောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မိမိကိုယ်ကို ရခိုင်ပါဟု ကြွေးကြော်နေသူ ထက်ဝက်ကျော်တို့သည် မိမိတို့ နိုင်ငံသားမဟုတ် တဘက်နိုင်ငံက ခိုးဝင်လာပြီး မိမိတို့ရဲ့  ပိုင်နက်ကို လုယူရန် ရောက်ရှိနေသော ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသား ဘင်္ဂါလီ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်အနွယ်ဝင်များဆိုတာကိုပါ တပါးတည်း ထည့်သွင်းစဉ်စားဖို့လိုပါ လိမ်မယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အခုတလော အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်နေသော ALP ခေါ် ဘင်္ဂါလီ ခေါတော ရခိုင်အနွယ်ဝင်အများဆုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုတို့၏ အကြမ်း ဖက် မီးရှို့ မုဒိမ်း၊ လုယက်မှုများတွင် အရပ်သား ဟန်ဆောင်၍ နောက်ကွယ်က အကြမ်းဖက်းသောင်းကျန်နေသောALP အားသမ္မတကိုယ်တိုင် အကြမ်းဖက်သမားဟုသက်မှတ်ခဲ့သည် ကို အောက်မှာ မူရင်း အတိုင်းဖတ်ပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂⁄ ၂၀၁၂ တွင် အပိုဒ်(၄) တွင်
” ယခုကဲ့သို့ လူစုလူဝေးဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီး ခြင်းကိစ္စများတွင် တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသေးစိတ်စီစဉ်ခြင်း၊ ဒေသန္တရလုပ် လက်နက်များဖြင့် အချိန်ကိုက် ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းများ တွေ့ရှိရသည့်အပြင်၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားသော အဖွဲ့အစည်းများပါ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိနေသကဲ့သို့၊ အခြား တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှလည်း အချို့သော ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် အထောက်အထား များကို တွေ့ရှိရပါသည်။” ဟုထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။
နိုဝင်္ဘာ ၁၀ ရက်နေ့က ထိုင်နိုင်ငံချင်းမိုင်ကို ရောက်ခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မီတီ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းကလည် သမ္မတကြီး ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ALP အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုကို အတိအလင်း ပြောဆိုသတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားသော အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ ALP အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်သူ အုပ်စုကိုဆိုလိုတာပါ။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့  ကြေညာချက် ထွက်လာအပြီးမှာ ALP ဘင်္ဂါလီရခိုင် အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုတို့ဘက်က လက်စားချေ တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မဆီမဆိုင် ဘင်္ဂလာ-မြန်မာနယ်စပ် တွင် အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာတပ်မတော်သားများအား ရှောင်တခင် ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်၍ GE တပ်သားတစ်ဦးကို အသေပစ်သတ်ပြီး ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ ALP အကြမ်းဖက်သမားများမှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသော GE တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကို ဘင်္ဂလာ-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ALP ဘင်္ဂါလီရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားတို့ ခိုအောင်ရာ အကြမ်းဖက် သင်တန်းစခန်းများတွင် ချုပ်နှောင်းထားပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများလုပ်နေကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ- ဘင်္ဂလာနယ်စပ်တွင် မြန်မာတပ်မတော်မှ GE တပ်သား (၁) ဦး အသတ်ခံရပြီး (၃) ဦးဖမ်းဆီးသွားမှုမှာ ရခိုင်တော်လှန်ရေး ပါတီ ALP ရဲ့ လက်ချက်ဆိုပြီး ကုလားတန် သတင်း ဌာနရဲ့ သတင်းတပုဒ်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီ ခေါတော ရခိုင်အနွယ်ဝင် အများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းစားသော ALP အကြမ်းဖက်သမားတို့က အစိုးရကို ဤသို့စွပ်စွဲထားပြန်။
“ စစ်တပ်ဖက်က ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ အထောက်အထားတွေ အများကြီးရထားတာရှိတယ်။ အဲဒါ ကိုလည်း ဦးအောင်မင်းကို တရားဝင် ပြောလိုက်တယ်။ အခုဖြစ်ပွားတဲ့ အကြမ်းဖက်မှု တွေမှာ ရခိုင်ပြည်လွတ် မြောက်ရေး ပါတီဖက်က လုံးဝ ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတာကို ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်” လို့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မီတီ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းနှင့် ချမ်းမိုင်တွင် တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့ ကြောင်း ခိုင်သုခ၏ ပြောကြားချက်ကို နိရဉ္စရာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရိုက်တာရဲ့ သတင်းတပုဒ်မှာတော့ RNDP ပါတီရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး “ဦးလှစော”ကတော့ ဇွန်လနဲ့ အောက်တိုဘာလတွေမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင် သုတ်သင်ရေး အကြမ်း ဖက်မှု တွေမှာသူတို့ပါတီက လုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ကြိုးကိုင်တာမဟုတ်ဘူးရယ်လို့ ငြင်းဆိုပေမယ် နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် ရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျူးတဲ့အခါ အောက်ခြေကပါတီဝင်တွေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်လို့ ဝန်ခံဖြေဆိုသွားကြောင်းကို ဖော်ပြပါတယ်။
အဓိကရုန်း အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်မှု အထောက်အထားတွေ့ရှိရင် RNDP ပါတီကို ဖျက်သိမ်းပစ်နိုင်တယ်လို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်က သတိပေးထားကြောင်း ဒီသတင်းကို RNDP ဘက်၊ စစ်တပ်ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးဆီမှ ရိုက်တာသတင်းဌာနက ရရှိထားတာ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ — with Naing Win Zahid and 48 others.
This entry was posted on January 15, 2013, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို တရုတ်နည်းပညာဖြင့် ကမ္ဘာသိအောင် ပြသပေးလိုဟုဆို
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်ဆိုသူ စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုများ →
မောက္ခ ပညာရေး မဂ္ဂဇင်းများ